Myanmar Youth Media Club - America’s Famous Serial Killers!
PoorBest America’s Famous Serial Killers!
Tuesday, 10 May 2011 00:00	Written by Administrator	Knowledge 101_sec	- Knowledge 101	TwitterSocButtons v1.4
MYMC က တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Knowledge101 အစီ အစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ရောက် လာပြန်ပါပြီ။ အကြောင်း အရာအသစ်တင်တိုင်း အစဉ်အမြဲဖတ်ရှု အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ် များကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံက ထင်ရှားပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ချို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ ရဲ့အမြင်မှာတော့ သာမန်လိုပဲ လှုပ်ရှားသွားလာနေပေမယ့် မမြင် ကွယ်ရာမှာတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းစွာ လူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့ လူတွေအကြောင်းက MYMC ပရိသတ်ကြီးအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မယ် လို့တော့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီအကြောင်းအရာကို တင်ဆက်တဲ့နေရာမှာ လူငယ်တွေကို စိတ်ကြမ်းတမ်းမှု ဖြစ်အောင်၊ အတုမြင်အတတ်သင်ဖြစ်အောင် ဖော်ပြပေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဗဟုသုတရစရာဖြစ်အောင်သာ တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အားနည်းချက်တွေ၊ မှားယွင်းမှုတွေရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။ အစီအစဉ်လေးကို စလိုက်ကြရအောင်နော်။
စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေကို သာမန်အမြင်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ သူတုိ့တွေဟာ သာမန်လူတွေလိုပဲ ထင်ရတဲ့အပြင် တစ်ချို့လူတွေဟာ ယဉ်ကျေးပြီးတော့ အပြောလည်းကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေကို အနီးကပ်လေ့လာပြီးတော့ အကျင့်စရိုက်တွေ၊ ပင်ကိုယ် ဗီဇတွေကိုသိမှသာ သူတို့ရဲ့စိတ်ထားအစစ်အမှန်ကို သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ္တဇလူသတ်သမားအများစုရဲ့ နောက်ကြောင်းကို ပြန်ပြီးကြည့် ကြည့်တဲ့အခါမှာ အများစုဟာ ငယ်စဉ်တုန်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရလို့ စိတ်မှာဒဏ်ရာ ရခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာ ငယ်စဉ်ကရရှိခဲ့တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားဖို့အတွက် စိတ်ထွက်ပေါက်ရှာကြရင်းနဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ စိတ္တဇဖြစ်သွားပြီးတော့ လူသတ်သမားတွေဖြစ်သွားရတာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရာဇ၀င်မှာ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေ ရာကျော် ရှိခဲ့တဲ့အထဲက တစ်ချို့ကတော့ ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ အခုအချိန်ထိ မေ့လုိ့မရသေးတဲ့သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလိုလူသိထင်ရှားတဲ့ စိတ္တဇ လူသတ်သမားတွေ အများကြီးထဲကမှ လူတွေရဲ့စိတ်ကို အလွန်အမင်းကြောက်လန့်စေခဲ့တဲ့ လူအနည်းငယ်အကြောင်းကို ဗဟုသုတအနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ Herman Webster Mudgett – Dr. Holmes (Killings between 1893 and 1895)
Mudgett ရဲ့ လူသတ်ဇာတ်လမ်းအစကတော့ ဆေးကျောင်းသားအရွယ်မှာ University of Michigan ကနေ အလောင်းတွေကိုခိုးတာကနေ စပြောရမှာပါပဲ။ သူက ဒီအလောင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး နာမည်မျိုးစုံနဲ့ ရဲတွေဆီကနေ အာမခံငွေကြေးကို လိမ်လည်ယူခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ သူဟာ ဆေးဝါးဆိုင်တွေနဲ့ တည်းခိုခန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတည်းခိုခန်းထဲမှာတော့ Acid တွေထည့်ထားတဲ့ ပုလင်းတွေ၊ လျှို့ဝှက်တံခါးပေါက်တွေ၊ ထောင်ချောက်တွေနဲ့ သေစေ နိုင်တဲ့အရာတွေကို ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ လာရောက်တည်းခိုတဲ့ လူတွေကို သတ်ပစ်ပြီးတော့ အာမခံငွေကြေးကိုယူခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမတွေကိုတော့ ဟန်ဆောင်လက်ထပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပြီးအပိုင် လွှဲပြောင်းစေပြီး ဓါတ်လှေကားပေါ်က တွန်းချပြီးဖြစ်စေ၊ ဓါတ် ငွေ့နဲ့ဖြစ်စေ သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ Mudgett ကို New Hampshire မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး သူ့ဖခင်ကတော့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ Mudgett က ငယ်စဉ်တုန်းက ဆေးခန်းသွားရမှာကိုအလွန်ကြောက်ခဲ့ပြီး ဆေးကျောင်းတတ်စဉ်တုန်းကလည်း အရိုးစုတွေကိုကိုင်တွယ်ရတာ ကို ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြောက်ရွံ့မှုဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေအတွက် လမ်းစဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီကြောက်ရွံ့မှုကို ပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ရင်းနဲ့ အလောင်းကောင်တွေအပေါ် အာရုံရောက်လာခဲ့ပြီး စတင်ခိုးယူခဲ့ပါတော့တယ်။ Chicago ကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးနောက်မှာတော့ Mudgett ဟာ H.H. Holmes ဆိုတဲ့နာမည်ကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပထမအိမ်ထောင် ရှိနေတုန်းမှာပဲ နောက်ထပ် ၂ ခါ အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ကို လူတော်တော်များများက မိန်းမတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးစန်းပွင့်သူလို့ ပြောကြ ပါတယ်။
Mudgett ရဲ့ လျှို့ဝှက်ခန်းတွေ၊ လျှို့ဝှက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့လူသတ်ခန်းကြီးပါပဲ။ မြေညီထပ်မှာ ဆေးဆိုင်တွေနဲ့ အခြားဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ အပေါ်ထပ်ကတော့ သူ့ရဲ့ရုံးခန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြေအောက်ထပ်မှာ အခန်းပေါင်းရာကျော် ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီအခန်းတွေဟာ ပြတင်းပေါက်မပါ၊ အတွင်းကနေလည်း ဖွင့်လို့မရ၊ အသံလုံအခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမသားကောင် အများစုဟာ သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ အာမခံငွေကြေးတွေကို သူ့နာမည်နဲ့လွှဲပြောင်းထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အသံလုံဓါတ်ငွေ့ခန်း တွေဟာ လူသတ်တဲ့နေရာမှာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သားကောင်တွေရဲ့အော်ဟစ်သံတွေကို ဘယ်သူမှမကြားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး အလောင်းတွေကိုတော့ အသားတွေကိုခွာထုတ်လိုက်ပြီး အရိုးစုတွေကိုပုံသွင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအရိုးစုတွေနဲ့ အတွင်းကလီစာတွေကိုတော့ ဆေးကျောင်းတွေကို ပြန်လည်ရောင်းချပါတယ်။ Mudgett ဟာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့အလုပ်ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပြီး သူ့လူနာအများစုကတော့ သေဆုံးကြတာချည်းပါပဲ။ ရဲတွေက သူ့ကိုသံသယရှိနေပြီလို့ သိတဲ့အချိန်မှာတော့ Mudgett ဟာ သူ့ရဲ့အိမ်ကြီးကို မီးရှို့ပြီးထွက်ပြေး သွားခဲ့ပါတယ်။ မီးအကြွင်းအကျန်တွေထဲမှာ လူ ၂၀၀ ကျော်လောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Mudgett ကို ဖမ်းဆီးမိသွားပြီး ကြိုးပေးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခြားအမျိုးသမီးလူသတ်သမားတွေလို Gunness က အဆိပ်ခတ်သတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ လူတွေ ကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်လိုက်တာပါ။ Gunness ဟာ အသက် ၄၂ နှစ်အရွယ်မှာ မွေးရပ် Norway နိုင်ငံကနေ Indiana ပြည်နယ် La Porte မှာရှိတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုကို သူမပထမဆုံး ယောင်္ကျားရဲ့ အသက်အာမခံကရတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ ၀ယ်ယူပြီးပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ပါတယ်။ သူမ ခင်ပွန်းနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ အစရှာလို့မရပဲ ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် လည်း အာဏာပိုင်တွေကတော့ Gunness အပေါ် သံသယမရှိခဲ့ပါဘူး။ La Porte ကို ကျန်ခဲ့တဲ့ ကလေးတွေနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ပြီးခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ Gunness ဟာ နောက်အိမ်ထောင်ထပ်ပြု ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယယောက်ျားဖြစ်သူ Peter Gunness လည်း လက်ထပ်ပြီး ၉ လအကြာမှာ သေ ဆုံးသွားပြန်ပါတယ်။ Gunness အတွက်တော့ အသက်အာမခံလျော်ကြေးငွေတွေ ထပ်ရလိုက် တော့ ပွပြီးရင်းပွပေါ့။ နောက်နှစ်အငယ်အတွင်း Gunness ရဲ့ဘ၀ထဲကိုဝင်လာတဲ့ ယောင်္ကျားတွေအားလုံး သဲလွန်စရှာမရဘဲ ပျောက်ခြင်းမလှ ပျောက်ပျောက်သွားကြပါတယ်။ Gunness တစ်ယောက်လည်း ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ မုဆိုးမဆိုတဲ့ နာမည်တစ်လုံးတွင်သွားခဲ့ပါတယ်။ Gunness က သတင်းစာတွေထဲမှာ လက်ထပ်ဖို့ကြော်ငြာတွေထည့်ပြီး ယောက်ျားတွေကို အိပ်ထောင်ရေးသုခ အပြည့်အ၀ခံစားရမယ့်အပြင် အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ရပါစေမယ်လို့ အယုံသွင်းကောင်းသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေအနေနဲ့ကတော့ ကြော်ငြာကိုမြင်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ La Porte အထိကို သူတို့စုမိဆောင်းမိထားတာလေးတွေနဲ့ ရောက်လာကြပါတယ်။ Guness က သူ့ထောင်ချောက် ထဲရောက်လာတဲ့ ယောက်ျားတွေကို ဆေးခတ်၊ အိပ်ငွေ့ချပြီး ၀က်သားပေါက်တွေကို ပေါ်တဲ့အတိုင်း ခုတ်ထစ်ပြီး အပိုင်းပိုင်းဖြတ်သတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖယောင်းသုတ်၊ အ၀တ်နဲ့ပတ်ပြီး သူမရဲ့လယ်တွေထဲမှာ မြှပ်လိုက်ပါတယ်။ သူကြီးပြင်းလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူမှ အတိအကျ၊ သေသေချာချာ မပြောတတ်ကြပါဘူး။ သူမမှာ မောင်နှမ ၈ ယောက်ရှိပြီး Norway နိုင်ငံ Stoerstgjerdet မြို့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ကောလဟာလတစ်ခုမှာ Gunness က ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ဝန်ရပြီး အဲဒီ့ယောက်ျားက သူမရဲ့ဗိုက်ကို လူကြားသူကြားထဲမှာ ကန်လိုက်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီယောက်ျားလည်း သူမအနားကနေ သိပ်မကြာခင်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ သူ့ညီမတစ်ယောက်ပြောပြချက်အရတော့ Gunness က ငွေအရမ်း မက်ပါတယ်တဲ့။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်မှာ Guness ရဲ့လယ်အိမ်ကို မီးလောင်ပါတယ်။ မီးငြိမ်းသွားပြီးလို့ အိမ်တ၀ိုက်ကို လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ယောက်ျား၊မိန်းမ၊ကလေးတွေရဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေ အများကြီးတွေ့ကြရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကလေးတွေလဲလို့ စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Gunness ကလေးတွေဖြစ်နေသလို ခေါင်းပြတ်နေတဲ့ မိန်းမအလောင်းကတော့ Gunness ဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ကြက်သတ်သလို အပိုင်းပိုင်းပြတ်ပြီး စုတ်ပြတ်နေတဲ့ အလောင်းတွေကို Gunness ရဲ့ အဆောက်အဦးတ၀ိုက်မှာ ရှာတွေ့ပါတယ်။ ခေါင်းဖြတ်၊ ခြေတွေ လက်တွေကို လွှနဲ့တိုက်ထားတဲ့ ယောင်္ကျားအလောင်းတွေဆိုတာ မြင်လို့၊ ကြည့်လို့တောင် မကောင်းပါဘူး။ Gunness သေပြီလို့ ယူဆနေ တုန်းမှာပဲ သူမရဲ့ လယ်မှာ အကူလုပ်ဖော်လည်းဖြစ်၊ ချစ်သူဆိုလည်းဟုတ်တဲ့ Lamphere က Gunness မသေသေးပါဘူး။ အကုန်လုံးကို သေတယ်လို့ လှည့်စားပြီး သူကိုယ်တိုင် သူမလွတ်မြောက်အောင် ကူပေးလိုက်တာပါလို့ ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာ ဖွင့်ဟပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ တရားဝင် အနေနဲ့တော့ Gunness ကိုသေသွားပြီလို့ပဲ ကြေငြာထားပါတယ်။ Guness က လူ ၄၉ ယောက်သတ်ခဲ့မယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
Albert Fish (Killings between 1919 and 1930)
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးစိတ္တဇလူသတ်သမား၊ လူသားစားပြီးတော့ ကလေးငယ်တွေအပေါ် မတရားကျင့်ကြံသူတစ်ယောက်ကတော့ Albert Fish ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Gray Man, Brooklyn Vampire, The Boogeyman, The Werewolf of Wysteria လို့လည်း ခေါ်ကြပါသေးတယ်။ Albert Fish ဟာ အပြင်ပန်းမှာတော့ ချစ်ဖို့ကောင်းပြီးနှစ်လိုဖွယ်အပြည့်ရှိတဲ့ အဖိုးတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ယောက်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ သားသမီး၊ မြေးတွေက တကယ့်ကိုစံပြလင်သားတစ်ယောက်၊ အဖေတစ်ယောက်၊ အဖိုးတစ်ယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ပြစ်မှုတစ်ချို့ဆိုရင် ယုံနိုင်စရာတောင်မရှိပါဘူး။ Albert Fish ရဲ့ ငယ်နာမည်က Hamy Fish ဖြစ်ပြီး Washington D.C. မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မောင်နှမ ၄ ယောက် မှာ အငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။ Albert Fish ရဲ့ မိသားစုဝင်အများစုဟာ စိတ်ရောဂါသည်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူ့ဖခင်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့မိခင်က Albert ကို မိဘမဲ့ဂေဟာကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ Albert က ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်ပြီး အဲဒီနာကျင်မှုကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ သူ့အသက် ၁၂ နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကို စတင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး အရက်သောက်တာတွေ၊ ဆေးခြောက်ရှုတာတွေပါ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်တွေကိုတော့ အများဆုံး ရေချိုးကန်တွေကိုသွားပြီး တခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်တာနဲ့တင် အချိန်ကုန်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်ဟာ သူ့အတွက်တော့ လက်ထပ်ပြီးလို့ ကလေး ၆ ယောက်ရတဲ့အထိ လိင်တူဆက်ဆံဖို့အတွက် အစပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ Albert က လိင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ပြည့်တန်ဆာအိမ်တွေကိုလည်း မကြာခဏသွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Albert ဟာ သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတွေထဲကို (ယောက်ျားအင်္ဂါအပါအ၀င်) အပ်တွေလည်း ထိုးသွင်းတတ်ပါသေးတယ်။ သူ့ကို ဓါတ်မှန်ရိုက် ကြည့်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အပ်ပေါင်း ၂၇ ချောင်းရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Albert အသက် ၅၅ နှစ် ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ စိတ်နယ်လွန်တွေဖြစ်ရပ်တွေကို စတင်ခံစားလာရပြီး ဘုရားသခင်က ယောက်ျားငယ်လေးတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး သူတို့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ သူ့ကိုဒီလောကထဲ စေလွှတ်လိုက်တာလို့ ထင်မြင်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Albert ဟာ လူတွေကို စတင်သတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ Albert ကို လူသတ်မှု ၅ ခုအတွက် စွဲချက်တင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း Albert ကတော့ ကလေးငယ်ပေါင်း ၁၀၀ နဲ့ သူထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်လုိ့ ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ Albert ကိုတော့ လျှပ်စစ်ထိုင်ခံပေါ်မှာ သေဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Ed Gein (Killings between 1947 and 1957)
ရာဇ၀င်မှာအထင်ရှားဆုံးနဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး လူသတ်သမားလို့ Ed Gein ကို တင်စား ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလည်း စိတ္တဇရုပ်ရှင်တော်တော်များများမှာ အဓိကဇာတ်ကောင် အဖြစ် သုံးထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲကမှ ထင်ရှားတာတွေကတော့ Psycho ထဲက Alfred Hitchcock နဲ့ The Silence of the Lambs ထဲက Buffalo Bill ဇာတ်ကောင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Ed Gein ကို ၁၉၀၆ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ မွေးချင်းအကိုတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ Ed Gein တို့ညီအကိုဟာ အရက်စွဲနေတဲ့ဖခင်၊ စည်းကမ်းတင်းကြပ်ပြီး ဘာသာတရားကို အရမ်း ယုံကြည်တဲ့မိခင်နဲ့အတူ နေထိုင်ပါတယ်။ Ed Gein ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိခင်အပေါ်မှာအရမ်း သံယောဇဉ်ကြီးခဲ့ပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုတွေကြောင့် အမုန်းတွေ လည်းရှိနေပါတယ်။ သူမဟာ Ed Gein တို့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘုရားတရားအကြောင်းအပြင် မိန်းမတွေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကောင်းမှု တွေကို နားသွင်းပြောဆိုထားတာကြောင့် Ed Gein ဟာ ရှက်ကြောက်တတ်တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာခဲ့တာပါ။ အရက်စွဲတဲ့ရောဂါနဲ့ပဲ Ed Gein ရဲ့ဖခင် သေဆုံးသွားပြီးမကြာခင်မှာပဲ အကိုဖြစ်သူ Henry ဟာလည်း မီးလောင်မှုနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Henry ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက Ed Gein အပေါ်ကို မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပက်သက်ပြီး မကျေနပ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ Henry ရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ မယုံ သင်္ကာဖြစ်စရာတွေရှိနေတာမို့ Ed Gein ကို လူသတ်သမားအဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့ကြပါသေးတယ်။ မိခင်သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Ed Gein ဟာ အထိန်းအကွပ်မဲ့သွားခဲ့ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ Ed Gein ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ မိန်းမတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အလွန်အမင်းစွဲလမ်း လာခဲ့ပါတယ်။ Nazi Camps တွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ခွဲစိတ်မှုတွေ၊ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတွေကို အတုယူကာ အုတ်ဂူတွေကိုပြန်တူး၊ အလောင်းတွေကို ပြန်ဖော်ပြီးတော့ သူကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်တဲ့အခါမှာ သူ့မိခင်ရဲ့ အလောင်းကိုတောင် ပြန်တူးပြီးတော့ စမ်းသပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီလိုစမ်းသပ်ခွဲစိတ်မှုတွေဟာ သူ့ရဲ့စိတ္တဇကိုပိုပြီးတော့ ပြင်းထန်လာစေပါတယ်။
Ed Gein က သူ့ကိုယ်သူမိန်းမတစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့တောင်စိတ်ကူးရှိတဲ့အတွက် လူတွေရဲ့အရေပြားတွေကို ရင်သားပုံစံဖြစ်အောင် လုပ်ပြီးတော့ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် လတ်ဆတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်ပြီးတော့ လူတွေကိုစတင်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ Ed Gein က သူသတ်လိုက်တဲ့လူတွေကို အရေခွံချွတ်၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကလီစာတွေကိုထုတ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေနဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်ကို အလှဆင်ထားပါတယ်။ အရေခွံတွေနဲ့လည်း အမှိုက်ပုံးတွေ၊ ပရိဘောဂတွေနဲ့ အင်္ကျီတွေတောင် ချုပ်ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ ရဲတွေက သူ့ကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့သူ့အိမ်ကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့အိမ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ခေါင်းတို့၊ လည်ပင်းတို့ကိုဖြတ်ထားပြီးတော့ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေ၊ အရိုးခေါင်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ထမင်းစားပန်းကန်တွေ၊ လူ့အရေခွံတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ ထိုင်ခုံအစွပ်တွေအပြင် မျက်နှာ အရေပြားတွေ၊ မိန်းမအင်္ဂါတွေနဲ့လုပ်ထားပြီး ငွေရောင်သုပ်ထားတဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံး မြင်ကွင်းကတော့ နှလုံးတစ်ခုကို မီးဖိုပေါ်ကဒယ်အိုးထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတာပါပဲ။ အဲဒီ့နှလုံးဟာ သူ့အမေရဲ့နှလုံးလို့လည်း ထင်မှတ်ရပါတယ်။ ရဲတွေရဲ့ အတည်ပြုချက်အရ မိန်းကလေး ၁၅ ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Ed Gein ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရတော့ သူသတ်ခဲ့တဲ့မိန်းမတွေရဲ့ ယောကျာ်းတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အနံ့အသက်ကို မခံနိုင်တဲ့အတွက် ဘယ်မိန်းမနဲ့မှ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုခဲ့ပါတဲ့။ သက်ဆိုင်ရာက Ed Gein ကို စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်အနေနဲ့ Waupan State ဆေးရုံမှာ တင်ထားခဲ့ပြီးတော့ cancer ရောဂါနဲ့ အသက် ၇၈ နှစ်မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Charles Manson (Killings in 1969)
၁၉၆၀ ခုနှစ်တွေရဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာတစ်ခုအနေနဲ့ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့လူ ဒါမှမဟုတ် မကောင်း ဆိုးဝါးလို့တောင် တင်စားခေါ်ခံရတဲ့သူကတော့ Charles Manson ဖြစ်ပါတယ်။ Charles ကို ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီးသူ့အမေကတော့ ၁၆ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ပြဿနာကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ Charles အမေက Charles ကို များသောအားဖြင့် အဒေါ်တွေ၊ဦးလေးတွေလက်ထဲထားခဲ့ပါတယ်။ ဓါးပြ တိုက်မှုနဲ့ အဖမ်းခံရပြီး စာရိတ္တပြုပြင်ရေးထောင်ကို သွားရတဲ့အချိန်မှာလည်း Charles ကို ဒီအဒေါ်တွေ၊ ဦးလေးတွေနဲ့ပဲ ထားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ သူမပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်း မိခင်စိတ်နဲ့ သားသမီးကို တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိပဲ သားသမီးကို အရက်နဲ့လဲလိုက်ဖို့အဆင့်ထိတောင် စိတ်ပိုင်း ဖြတ်ထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပါ။ မိခင်မေတ္တာကိုမရတဲ့ပြင် ဖခင်ဘယ်သူမှန်းတောင် Charles သိခွင့်မရခွင့်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ ကြီးပြင်းလာတော့ Charles ဆိုးတယ်ဆိုတာ မထူးဆန်းပါဘူး။ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ရေးကျောင်းကို အသက် ၉ နှစ် အရွယ်မှာ အပို့ခံရပြီး Charles အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ မုဒိန်းမှု၊ မူးယစ်ဆေးသုံးမှု၊ ခိုးဝှက်မှု အစရှိတာတွေနဲ့ စွဲချက် အမျိုးမျိုးအတင်ခံရပြီး ခဏခဏအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။
Charles က ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကိုအသုံးချပြီး လူတွေကို သူ့လမ်းစဉ်တွေကျင့်ကြံအောင် ဖျားယောင်းပါတော့တယ်။ အသက် ၃၄ နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ Charles Manson မိသားစုဝင်များဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ နောက်လိုက်တွေစုမိနေပါပြီ။ အများစုကတော့ အတိတ်က ဘ၀ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ မိန်းမပျိုငယ်လေးတွေပါ။ သူက Amphetamines ဆိုတဲ့ စိတ်ကြွဆေးတွေရဲ့ အစွမ်းနဲ့ လူတွေကို လိုချင်တဲ့ပုံစံပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်ချို့တွေဆိုရင် သူ့ကို ယေရှုဘုရားသခင်လို့တောင်ခေါ်ဝေါ်ပြီး သူ့လိုအပ်ချက်တွေ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေအပါအ၀င်) အားလုံးကို ဖြည့်စည်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Charles က ဂီတကို မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Beatles အဖွဲ့က ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာမှာတွေကို သတိလာပေးတဲ့ ကောင်းကင်ကစေတမန်တွေလို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ Charles ရဲ့ အသိစိတ်အာရုံတစ်ခုလုံးက ကမ္ဘာပျက်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပဲရောက်နေပြီး တစ်ကယ်ကမ္ဘာပျက်တဲ့အခါမှာ လူမည်း တွေက လူဖြုတွေကိုကြီးစိုးပြီး လူဖြူတွေကိုသတ်တဲ့အခါ သူတို့မိသားစုတစ်စုပဲ ကျန်ခဲ့မယ်လို့လည်း ပြောပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် Charles က လူမည်းတွေရဲ့ ရှုပ်ထွေး ကောက်ကျစ်မှုတွေကြောင့် အပေါ်စီးနဲ့ ကြာကြာနေရမှာမဟုတ်ဘဲ တစ်ချိန်မှာ သူရဲ့ Manson က ကမ္ဘာကို လွှမ်းမိုးမှာပါဆိုပြီး ယုံကြည်ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါတွေ ဖြစ်မလာချိန်မှာတော့ သူ့နောက်လိုက်မိသားစုဝင်တွေကို လူတွေလိုက်သတ်ခိုင်းပါ တော့တယ်။ ပထမဆုံး အသတ်ခံလိုက်ရတာကတော့ Director Roman Polanski ရဲ့ ဇနီးမယား Sharon Tate ပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ LaBlanca မိသားစုတစ်စုလုံးဖြစ်ပါတယ်။ Charles ကို သေဒဏ်ပေးလိုက်ပေမယ့် ဒီလိုအပြစ်တွေကျူးလွန်ရတာ သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြောင့်လို့ ယူဆသတ်မှတ်ပြီး တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ လျှော့ပေါ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ 2008 ခုနှစ်အထိကတော့ Corcoran အကျဉ်းထောင်မှာ ရှိနေပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လူတွေလေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ယောက်လည်းဖြစ်၊ ကလေးငယ်တွေအတွက်လုပ်တဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲတွေမှာ joker အဖြစ် ဖျော်ဖြေပေးနေတဲ့ John Wayne Gacy ကလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသမိုင်းထဲက လူသိထင်ရှားတဲ့ စိတ္တဇလူသတ် ကောင်တစ်ဦးပါပဲ။ Gacy ကို ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ အလုပ်သမားလူတန်းစား မိဘတွေကမွေးဖွားခဲ့ပြီး ညီမ ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။ Gacy ရဲ့ ဖခင်ဟာ အရက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အရက်မူးလာတဲ့အခါတိုင်း သားသမီးတွေကို ရိုက်နှက်တတ်ပါတယ်။ Gacy ဟာ သူ့ဖခင်ကို အလွန်ချစ်တာကြောင့် တတ်နိုင်သ လောက် ဖခင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ ကြိုးစားပေမယ့်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ Gacy အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ် မှာ ဒန်းပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီး ခေါင်းကိုထိခိုက်သွားခဲ့တာကြောင့် အသက် ၁၆ နှစ်အထိ မကြာခဏ သတိလစ်တတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သာမန် နေထိုင်မှုတွေ၊ ရန်လိုမှုမရှိတဲ့ အပြင်ပန်းတွေကြောင့် Gacy ဟာ လူတွေကိုစည်းရုံးတဲ့နေရာမှာ အားသာခဲ့ပါတယ်။ Gacy ဟာ အိမ်ထောင် ကျပြီး ကလေး ၂ ယောက်လည်း ရခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အလုပ်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့ လိင်တူဆက်ဆံတာကို သိသွားတာကြောင့် သူ့အမျိုးသမီးက Gacy ကို လမ်းခွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ Gacy က သူ့ရဲ့သားကောင်တွေကို မျက်လှည့်ပြသလိုနဲ့ လက်ထိပ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်ထိပ်ခတ်ခံထားရတဲ့လူတွေကို လက်ထိပ်ခတ်တာကို လွတ်အောင်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလက်ထိပ်ခတ်တာကို ခံလိုက်ရပြီးရင်တော့ မတရားကျင့်ပါတော့တယ်။ မတရားကျင့်နေတုန်းမှာ လည်ပင်းကိုကြိုးတုတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ချွန်မြတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုးပြီး သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ရဲတွေကသူ့ကို ဖမ်းဆီးတော့မယ်လို့ သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာတော့ Gacy ဟာ သူကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။ Gacy က ရဲတွေကိုဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်မှာတော့ ဒီလောကကြီးမှာ John Wayne Gacy ဆိုတာ ၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်က လူရွှင်တော်၊ တစ်ယောက်က စီးပွားရေးသမား၊ တစ်ယောက်က စည်းရုံးညှိနှိုင်းရေးသမားနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Jack Henley လို့လည်း အမည်ရတဲ့ မကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ပါတဲ့။ Gacy က လူသတ်မှု ၂၄ မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ကားဂိုဒေါင်အောက်မှာ မြှပ်ထားတဲ့ အုတ်ဂူ ၂၈ ဂူရဲ့နေရာကိုလည်း ပြောပြတဲ့အပြင် အလောင်း ၅ လောင်းကိုတော့ Des palines River ထဲကို စွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Gacy ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ဆေးထိုးပြီးတော့ သေဒဏ်ကျခံစေခဲ့ပါတယ်။ Ted Bundy (Killings between 1974 and 1978)
နောက်ထပ်တင်ပြပေးလိုတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားကတော့ ၁၉၇၅ ခုနှစ်နဲ့ ၁၉၇၈ ခုနှစ် တွေမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Ted Bundy ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေဟာ ရည်မွန်ပြီး ယဉ်ကျေးတဲ့အပြင် လူချောတွေပါ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အကြောင်းကို Ted Bundy က သက်သေ ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာလည်း Ted Bundy ဟာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ လူသတ်ကောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်မွန်မှုတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ရုပ်ရည်က မိန်းကလေးငယ်တွေကိုမတရားကျင့်ပြီးတော့ အလွယ်တကူသတ်ပစ်နိုင်တဲ့အထိ အထောက် အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ Ted Bundy က လူသေကောင်တွေကိုပါ မတရားကျင့်သေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေရဲ့ အတည်ပြုချက်အရတော့ Ted Bundy က အသက် ၁၄ နှစ်လောက်တည်းက လူတွေစသတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူသတ်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး အများစုဟာ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့ ရုပ်ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်လို့လည်း သိရပါသေးတယ်။ Ted Bundy ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်က Burlington, Vermont မှာ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်မိခင်က ဖခင်မပေါ်ပဲ Ted Bundy ကို မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ Ted Bundy က သူ့ရဲ့ မျိုးနွယ်နာမည်ကို သူ့ဖထွေးဆီကယူထားတာပါ။ Ted Bundy ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေကတော့ Ted Bundy ကို သူတို့သားလို့ အသိပေးထား ပြီးတော့ သူ့မိခင်ကိုတော့ အမလို့အသိပေးထားပါတယ်။ Ted Bundy က သူ့ရဲ့ပထမဆုံးချစ်သူက မစွန့်ပစ်သွားခင်အထိတော့ လူရည်မွန် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတာကို Ted Bundy ဟာ တခြား ဆယ်ကျော်သက်တွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသဘောမထားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ချစ်သူသူ့ဆီပြန်လာဖို့ကို နှစ်အတော်ကြာကြိုးစားခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ စိတ္တဇကြောင့် မိန်းကလေးတွေကို စတင်သတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးကို လက်စားချေပြီး ပြန်စွန့်ပစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Ted Bundy က သူ့ရဲ့သားကောင်တွေကို ချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ပညာသားပါတဲ့သူပါ။ တခါ တရံ သူ့သားကောင်တွေကို မချဉ်းကပ် ခင်မှာ အရက်သောက်ထားပြီးတော့ လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာရဟန်ဆောင်ပြီး မိန်းကလေးကို သနားစိတ်ဝင်အောင် ချဉ်းကပ်တတ်ပါတယ်။ တခါ တရံမှာ ရဲဟန်ဆောင်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မီးသတ်ငှာနက ၀န်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ ချဉ်းကပ်တတ်ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့သားကောင် တွေကို သူ့ကားအနားရောက်အောင် ခေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ခေါင်းကိုသံတုတ်နဲ့ မေ့မျောသွားအောင်ရိုက်၊ မတရားကျင့်ပြီးတော့ သတ်ပစ် လိုက်ပါတယ်။ Ted Bundy ဟာ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ အလောင်းတွေရှိတဲ့ Taylor Mountain ကို သွားပြီးတော့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် လူသေကောင်မိန်းကလေးတွေကို makeup လိမ်း၊ အလှပြင်ပြီးတော့ မပုပ်သိုးသွားခင်အထိ အတူနေတတ်ပါသေးတယ်။ Ted Bundy ဟာ လူသတ်မှု ၄၀ ကျော် ကျူးလွန်ပြီးတော့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ သေဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Ted Bundy က သူ့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ် စိတ်အား သန်မှုကြောင့် ဒီလိုပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ရတာပါလို့ သေဒဏ်မကျခင်မှာ ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ တရားဥပဒေရဲ့အပြင်ဘက်မှာ သူ့လိုလူတွေ အများကြီးရှိနေသေးပေမယ့် အဲဒီ့လူတွေကိုတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးပါလားဆိုပြီး ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ Ted Bundy ရဲ့ လူသိများတဲ့ စကားစုကတော့ "ငါတို့လို စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေဟာ မင်းတို့ရဲ့သားတွေ၊ မင်းတို့ရဲ့ယောကျာ်းတွေပါပဲ။ ငါတို့တွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်။ မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေဟာ ငါတို့ကြောင့် အမြဲတမ်းအသက်ပေးရဦးမှာပါပဲ" ဖြစ်ပါတယ်။
Coral Eugene Watts – (Killings between 1974 and 1982)
Coral Eugene Watts ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းမှာ ပထမဦးဆုံးသက်သေလိုအပ်တဲ့ အမှုဖြစ်သလို လူအယောက် ၈၀ ကနေ ၁၀၀ အထိ သတ်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တရားသေပြန်လွှတ် ပေးဖို့အထိတောင် ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ စုံထောက်တစ်ယောက်က သူသတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကို ပြန်ရေတွက် ဖို့အတွက်တောင် Watts ဆီမှာ လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းအလုံအလောက်မရှိဘူးလို့ပြောတော့ Watts က ဒီတခန်းလုံးမှာရှိနေတဲ့ လက်ချောင်း၊ ခြေချောင်းတွေပေါင်းရင်တောင် မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက စစ်ဆေးရေးအခန်းထဲမှာ လူ ၄ ယောက်ရှိနေပါတယ်။ စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေ ဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်အမျိုးအနွယ်လူမျိုးတွေကိုသာသတ်လေ့ရှိပေမယ့် African American ဖြစ်တဲ့ Watts ကတော့ သူနဲ့မျိုးနွယ်မတူတဲ့ လူဖြူမိန်းကလေးတွေကိုသာ သတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Watts ၀န်ခံတာကတော့ မိန်းကလေးကိုသတ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ အရိပ်အရောင်ကို တွေ့ရလို့ပါတဲ့။ များသောအားဖြင့်တော့ Watts က မိန်းမတွေရဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ပိတ်မိနေအောင်ဆိုပြီး ရေချိုးကန်ထဲမှာ ရေနှစ်သတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Watts က မိန်းမတွေကိုသတ်တဲ့ အခါမှာ သူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမရှိတာကြောင့် DNA ကို စစ်ဆေးပြီးတော့လည်း ဖမ်းဆီးလို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Watts ရဲ့ မိဘတွေဟာ Watts အသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာကွဲသွားခဲ့ပြီး သူ့အမေ၊ ဖထွေးတို့နဲ့ အတူတူနေတာပါ။ Watts ဟာ ငယ်စဉ် ကတည်းက ပြုမူဆက်ဆံပုံတွေဟာ ထူးခြားပါတယ်။ စာပေဘက်မှာ မထူးချွန်ပေမယ့်လည်း လက်ဝှေ့ထိုးတာကိုတော့ ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ်ကစပြီး ထူးဆန်းတဲ့အိပ်မက်တွေကို စတင်မက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အိပ်မက်တွေကတော့ မိန်းမတွေကိုလိုက်သတ်တဲ့ အိပ်မက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တွေက အိပ်မက်တွေမက်ပြီးရင် စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေများရှိသလားလို့ မေးတဲ့အခါ Watts က စိတ်ပင်ပန်းမှုမရှိတဲ့အပြင် စိတ်ကျေနပ်မှုတောင်ရပါတယ်လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၅ နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Watts ဟာ မိန်းမတွေကို ရိုက်နှစ်တာတွေ၊ လည်ပင်းညစ်တာတွေ လုပ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလုပ်ရုံနဲ့ မိန်းမတွေကို အပြစ်ပေးတာမလုံလောက် သေးပါဘူးတဲ့။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ကိုသတ်ဖို့ Watts ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ Watts က အသက် ၂၀ လောက်ကစပြီး မိန်းမတွေကို စတင်သတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် မတရားအနိုင်ကျင့်ခြင်းတော့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ တစ်ချို့လူသတ်မှုတွေဆိုရင် သားကောင်တွေကို ထိတွေ့ကိုင်တွယ်ခြင်းတောင် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ သူ့ရဲ့မိန်းမတွေကို သတ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ မကောင်း ဆိုးဝါးကို သတ်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ Watts က သူ့ရဲ့သားကောင်တွေကို နေရာစုံ၊ နယ်စုံမှာ လိုက်သတ်တတ်ပါတယ်။ ပစ်မှတ်အဖြစ်ရွေးချယ် လိုက်တဲ့ မိန်းမတွေနောက်ကို သေချာလိုက်ပြီးတော့ လူရှင်းတဲ့အချိန်၊ လူပြတ်တဲ့နေရာမှာ သတ်လေ့ရှိပါတယ်။ Watts က အသက် ၁၄ နှစ်နဲ့ ၃၄ နှစ်ကြား မိန်းမတွေကိုသာ သတ်တတ်ပါတယ်။ လူသတ်မှုတွေအားလုံးမှာ သက်သေမရှိတာကြောင့် Watts သာ အားလုံးကို မှန်မှန် ကန်ကန်ဝန်ခံမယ်ဆိုရင် အပြစ်ဒဏ်ကို လျှော့ပေါ့ပေးမယ်လို့တောင် တရားရုံးကစီရင်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ထောင်ထဲမှာရှိနေစဉ်မှာ အနေအထိုင်ကောင်းမွန်မှုကြောင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ တရားသေလွှတ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူ ၈၀ ကျော်ကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့တဲ့လူသတ်ကောင်ဖြစ်လို့ နောက်ဆုံးမှာတော့ တရားရုံးက Watts ကို ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာတော့ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
David Berkowitz – Son of Sam (Killings between 1976 and 1977)
နောက်ထပ် စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ဦးကတော့ David Berkowitz ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Son of Sam လို့လည်း ခေါ်ကြပြီးတော့ ၁၉၇၆ နဲ့ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွေမှာ လူသိများခဲ့ပါတယ်။ David Berkowitz ဟာ လူ ၆ ယောက်ကို သတ်ခဲ့ပြီးတော့ လူပေါင်းများစွာကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ New York City က စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ဦးပါ။ David Berkowitz ကို လူသိများရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ media တွေနဲ့ ရဲတွေကိုပို့ပေးတဲ့ သူ့ရဲ့စာတွေနဲ့ လူ သတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ David Berkowitz က သူ့ရဲ့လူသတ်မှုတွေ အပေါ် ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကို ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကတော့ သူ့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေက စေခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပါတဲ့။ မကောင်းဆိုးဝါးတွေက ခွေးတွေကိုဝင်ပူးပြီးတော့ မိန်းမတွေကိုသတ်ခိုင်းလို့ သတ်ရတာပါလို့လည်း ပြောပါသေးတယ်။ သူနေထိုင်တဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်လင်မယားဖြစ်တဲ့ Jack တို့ဇနီးမောင်နှံဟာလည်း မကောင်းဆိုးဝါးတွေဖြစ်ကြတဲ့အပြင် Jack က ခွေးတွေကို စေခိုင်းနေတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ David Berkowitz ဟာ နောက်တိုက်ခန်းတစ်ခုကို ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း မကောင်းဆိုးဝါးတွေက သူ့ကိုစိုးမိုးနေတုန်းပါပဲ။ သူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်တဲ့ Sam Carr ရဲ့ Labrador အမျိုးအစား ခွေးမည်းလေးကိုလည်း မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးနေတယ်လို့ ထင်မှတ်ပြီးတော့ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ညစဉ်ညတိုင်း ခွေးကသူ့ကို မိန်းမ တွေကို သတ်ဖို့အမိန့်ပေးနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ David Berkowitz ဟာ သူလူတွေကိုသတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ရဲတွေနဲ့ media တွေကို အသေးစိတ်စာရေးပြီး ပို့ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ David Berkowitz ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးမွေးချင်းပဲသူ့မိခင်သေဆုံးသွားတာကြောင့် အလယ်အလတ်တန်းစား မိသားစု တစ်ခုကမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ မွေးစားမိဘတွေက ချစ်ပြီးတော့ ဂရုစိုက်ကြပေမယ့် David Berkowitz ရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သူ့ကြောင့်သူ့မွေးမိခင် သေဆုံးရတယ်ဆိုပြီး ဒေါသတွေနဲ့နောင်တတွေ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ အဲဒီ့စိတ်ခံစားချက်ဟာ လူသတ်မှုတွေ ကျူးလွန်စေဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ သူ့ရဲ့မွေးစားမိခင်က cancer နဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ သူ့မွေးစားဖခင်က နောက် အိမ်ထောင်ပြုပြီးတော့ David Berkowitz ကို အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်မှာ ထားသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်မကြာခင်မှာပဲ သူ့ရဲ့မွေးမိခင်အရင်းဟာ မသေဘဲနဲ့ သူ့မှာညီမလေးတစ်ယောက်ပါရှိနေကြောင်း သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့စိတ်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲနဲ့ လူသတ်မှုတွေကို ကျူး လွန်ပါတော့တယ်။ David Berkowitz ဟာ ထောင်ဒဏ် ၃၆၅ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ FBI ကို "Son of Sam" ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ထွင်ပြီးပြောခဲ့တဲ့အတွက် သူ့ကိုရူးနေသူတစ်ယောက်အဖြစ် စာရင်းသွင်းလိုက်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့လူသတ်ရတဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းက သူ့ကိုစွန့်ပစ်သွားခဲ့တဲ့ သူ့အမေကိုမုန်းတာနဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး သူကျရှုံးခဲ့ရတာတွေကို မကျေနပ်တာတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတွေကို သူသတ်တဲ့အချိန်မှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ကြွမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ ၆ ယောက်တိတိ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Jeffrey Dahmer – Monster (Killings between 1978 and 1991)
Milwaukee ပြည်နယ်ဖွား စိတ္တဇလူသတ်သမား Jeffrey Dahmer ကတော့ အာရှနွယ်ဖွားနဲ့ အာဖရိကနွယ်ဖွား ကောင်လေးတော်တော်များများကို ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သားကောင်တွေဟာ ညှာတာမှုကင်းမဲ့စွာ အသတ်ခံရတဲ့အပြင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာတွေ၊ နံရိုးတွေကို ထုတ်ထားတာတွေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားပြုကျင့်မှုတွေကို အသတ်မခံရခင်မှာ ခံစားရတဲ့အပြင် အသတ်ခံရပြီးရင်လည်း Dahmer က လူသေကောင်တွေကို ချက်ပြုတ်စားသောက်တတ်ပါသေးတယ်။ Dahmer ဟာ ဓာတုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့သားဖြစ် ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အလောင်းကို ခွဲစိတ်စူးစမ်းရတာကို ၀ါသနာပါခဲ့ပါတယ်။ သူဆယ်ကျော်သက် ရောက်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်နေတတ်ပြီး အရက် လည်းစွဲနေပါပြီ။ College ကနေ ထုတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့် ဖခင်ဖြစ်သူက Dahmer ကို စစ်တပ်ထဲ အတင်းအကြပ်ဝင်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ နှစ်လောက်အကြာမှာပဲ သူ့ရဲ့အရက် အလွန်အကျွံသောက်မှုကြောင့် စစ်တပ်ကနေလည်း ထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ စစ်တပ်ကနေ အထုတ် ခံရပြီးတဲ့နောက် ဖခင်ဖြစ်သူကို ရင်မဆိုင်ရဲတဲ့အတွက် Dahmer ဟာ အဖွားဖြစ်သူနဲ့ ၆ နှစ်ကြာ သွားနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လူမြင်ကွင်းမှာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူ ဖော်ထုတ်ပြသမှုကြောင့် အဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အဖွားဖြစ်သူက သူ့ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပြစ်မှုတွေကို စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေမှုကြောင့် အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၁ နှစ် ကျခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာ စာရိတ္တကောင်းမွန်မှုကြောင့် ၁၀ လထဲနဲ့ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ကလွတ်လာတဲ့ အချိန်ကစပြီးတော့ Dahmer က လူသတ်မှုတွေကို စတင်ကျူးလွန်ပါတော့တယ်။ Dahmer ရဲ့ ပထမဦးဆုံးလူသတ်မှုကတော့ ထောင်က လွတ်ပြီးမကြာခင် သူ့အသက် ၁၈ နှစ်လောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့သားကောင်ကတော့ ၁၉ နှစ်အရွယ် လမ်းကြုံလိုက်တဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တုန်းက သူ့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်တဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ လွတ်မြောက်သွားဖူး ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ လမ်းပေါ်မှာအော်ဟစ်ပြေးလွှားနေပြီး Dahmer က လိုက်ဖမ်းနေတာပါ။ ရဲတွေရောက်လာတဲ့အခါ Dahmer က ကောင်လေးဟာ ၁၉ နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ သူ့အသိဖြစ်ပါတယ်လုိ့ လှည့်ဖြားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ရဲတွေကလည်း Dahmer ရဲ့ စကားကိုယုံကြည်ပြီး ကောင်လေးကို Dahmer နဲ့ ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Dahmer က ကောင်လေးကိုသတ်ပစ် လိုက်ပြီး ကောင်လေးနဲ့အရိုးခေါင်းကိုတော့ အမှတ်တရအနေနဲ့ သိမ်းထားပါတယ်။ နောက်ထပ်သားကောင်တစ်ယောက် ထပ်မံလွတ်မြောက် သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ သားကောင်ရဲ့သတင်းပေးမှုကြောင့် Dahmer ဟာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့လူသတ်မှုတွေကြောင့် ၁၅ ကြိမ် သေဒဏ်ကျခံသင့်တယ်လို့ ပြောဆိုကြပါတယ်။ Dahmer ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့ကိုသေမိန့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ထောင်ထဲမှာ ရှိနေချိန်အတွင်းမှာပဲ အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ခေါင်းမှာဒဏ်ရာအကြီးအကျယ်ရပြီး ပြင်းထန်တဲ့ head trauma နဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
Gary Ridgway – The Green River Killer (Killings between 1982 and 1984)
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ မိန်းမတွေကို အများဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားကိုပြောပါဆိုရင် Gary Ridgway ကိုပဲ ပြောရမှာပါ။ Ridgway က ပြည့်တန်ဆာတွေကို မုန်းတီးနေတဲ့သူပါ။ "စိတ်ရဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုအတွက် ငါသူတို့ကိုပိုက်ဆံမပေးနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါ့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်ဖို့ကတော့ ပြည့်တန်ဆာ တွေက အလွယ်ကူဆုံးပါပဲ။ သူတို့ကိုသတ်ဖို့အတွက် ငါသိပ်ပြီးကြိုးစားစရာမလိုဘူး။ နောက်ပြီး သူတို့ ပျောက်ဆုံးနေရင်လည်း ဘယ်သူကမှ သက်ဆိုင်ရာကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားကြမှာ မဟုတ်ဘူးလေ" ဆိုပြီး ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ Ridgway ကို Salt Lake City, Utah မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း ၂ ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ သူ့မိခင်ကတော့ မိန်းမကြမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ဖခင်အပေါ်မှာရော၊ သားသမီး တွေကိုပါ အမြဲဆူပူကြိမ်းမောင်းနေတတ်ပါတယ်။ Ridgway ရဲ့ IQ ဟာ ၈၀ ပဲရှိတဲ့အတွက် ဥာဏ်ရည် လည်းသိပ်မမှီပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ကြီးထွားမှုနှုန်းဟာ သာမန်ထက်နိမ့်ပြီးတော့ သူ့အသက် ၁၆ နှစ်မှာ ၆ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက် ကို ဓားနဲ့ထိုးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ အိမ်ထောင်ကျပြီး အိမ်ထောင်သက်ကို ၁၄ နှစ်အထိ မြဲအောင်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ Ridgway မှာ ပင်ကိုယ်ဗီဇ ၂ မျိုးရှိနေပါတယ်။ တစ်မျိုးက ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ ခင်ပွန်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်မျိုးကတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ စိတ္တဇလူသတ်သမားပါပဲ။ Ridgway ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြဿနာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့လည်း သိရပါသေးတယ်။
Ridgway ဟာ သူ့ရဲ့ပစ်မှတ်တွေကို ပြည့်တန်ဆာတွေ ရာနဲ့ချီရှိတဲ့ Green River အနားမှာ ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Green River လူသတ်သမားဇာတ်လမ်းရဲ့ သားကောင်ရဲ့အလောင်းကိုတော့ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ July လ၊ ၁၅ ရက်နေ့မှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမိန်းကလေးဟာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မတရားကျင့်ခံခဲ့ရပြီးတော့ အသတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ Ridgway ရဲ့ အကျင့်တစ်ခုကတော့ သူသတ်ပစ်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို တစ်နေရာမှာစုပြီး ထားတတ်တဲ့အကျင့်ပါ။ အဲဒီနေရာကို ဖြတ်သွားလိုက်တိုင်း သူ့ကို အားအင်တွေ ဖြစ်လာစေတယ်လို့လည်း ပြောပါသေးတယ်။ ရဲတွေကတော့ Green River လူသတ်သမားကို ၁၉၈၄ ခုနှစ်အထိ မဖမ်းမိတာကြောင့် အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတောင် ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ အပူတပြင်းလိုက်လံစုံစမ်းကြပါတယ်။ Green River လူသတ်သမားဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအတွင်းမှာ ၂ နှစ်ခွဲလောက်အထိ ခြောက်လှန့်စရာတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စိတ္တဇလူသတ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ Ted Bundy (သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပြီးသားသူ) ရဲ့ ပူးပေါင်းကူညီမှုနဲ့ Ridgway ရဲ့စိတ်ကို ခန့်မှန်းပြီးတော့ ဖမ်းဆီးတော့မှပဲ လက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။ Ridgway ဟာ မိန်းမပေါင်း ၇၁ ယောက်ကို သတ်ခဲ့တယ်လို့ ၀န်ခံခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ အယူခံဝင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ကိုသေမိန့်မချမှတ်ဘူးဆိုရင် သူသတ်ခဲ့တဲ့ တခြားမိန်းမတွေရဲ့အလောင်းတွေရဲ့ တည်နေရာကိုပြောပြမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြည်သူလူထုကတော့ Ridgway ကို သေဒဏ်ချမှတ်ဖို့ကိုသာ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Ridgway ကို သေမိန့် ၄၈ ကြိမ် ကျခံစေပြီးတော့ အခုအချိန်ထိ သူ့ရဲ့ဝိဥာဉ်ကို Washington ထောင်မှာ ချုပ်ထားဆဲပါပဲ။ Richard Angelo (Killings between April 1987 and October 1987)
Angelo အကြောင်း အစချီရမယ်ဆိုရင် သူရဲ့စိတ်က တစ်ခြားလူသတ်သမားတွေနဲ့ မတူပါဘူး။ သူရဲကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ Angelo က လူတွေရဲ့အမြင်မှာ စက်ဆုပ်ကြောက်လန့်စရာ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ ဆေးရုံသွားရဖို့ကို ကြောက်ရတယ့်အထိ ဂယက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ New York ပြည်နယ် Long Island မြို့ရဲ့ Good Samaritan ဆေးရုံမှာ အလုပ်စ၀င်တဲ့ အချိန်မှာ Angelo ဟာအသက် ၂၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူဟာလူရည်ချွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းကောင်းတာလုပ်ဖို့နဲ့ သူများတွေကို ကူညီရဖို့အတွက် ၀န်မလေးတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ သူအမြဲတမ်းစိတ်ကူယဉ်ပြီးတော့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့အဆင့်ကို မရောက်နိုင်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ စိတ်ဖောက်ပြီးတော့ Angelo တစ်ယောက်တစ်ခြား စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေလိုပဲ အန္တရာယ်များတဲ့ လူသတ်ကောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ညမိုးချုပ်ကနေ မနက်မိုးလင်းအထိ ဆေးရုံမှာတာဝန်ယူရတဲ့အချိန်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ Angelo က ဖောက်ပြန်နေတဲ့ စိတ်ရဲ့အလိုကို ကောင်းကောင်း အာသာဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လူနာတွေကို Pavulon နဲ့ Ancetine အစရှိတဲ့ ဆေးတွေထိုးပေးပြီး သေလုမျောပါး အခြေအနေရအောင် လုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့လူနာတွေကို သက်သာလာအောင် ဆေးထိုးပေးတာပါဆိုပြီး ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်။ ဆေးတွေထိုးပြီးတဲ့အခါ လူနာတွေအနေနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးထုံကျင်လာပြီး ဘာမှခံစားလို့မရတော့သလို အသက်ရှူပြွန်ကျဉ်းပြီး မွန်းကျပ်လာပါ တယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေနဲ့လည်း စကားမပြောနိုင်တော့ပဲ မျောနေပါတော့တယ်။ ဒီအချိန်မှာ လူတွေဆီက ချီးကျူးထောပနာပြုတာကိုခံချင်တဲ့ Angelo က သူရဲကောင်းဝင်လုပ်ပြီး အသက်ကယ်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ သူဝင်ကယ်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့် အစတည်းက ဆေးကိုမထိုးသင့်တဲ့ပမာဏတွေ ထိုးတာခဲ့တာကြောင့် ဆေးထိုးခံထားရတဲ့ လူနာတော်တော်များများက ဒီလိုနဲ့ပဲသေသွားခဲ့ရ ပါတယ်။ Angelo တစ်ယောက် ဒီပုံစံနဲ့ လူနာ ၂၅ ယောက်ကိုသတ်ခဲ့မယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သူဆေးထိုးလိုက်တဲ့လူနာတစ်ယောက်က ဆေးထိုးခံရပြီး ကုတင်နားမှာရှိတဲ့ အကူအညီတောင်းတဲ့ ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ လူတွေရောက်လာချိန်မှာ သူ့လုပ်ရက်တွေကို လက်ပူး လက်ကြပ်မိတော့တာပါပဲ။ သူနာပြုမလေးက ဆေးထိုးခံထားရတဲ့လူနာရဲ့ ဆီးကိုစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆရာဝန်တွေရဲ့ညွှန်ကြားချက် မပါပဲထိုးထားတဲ့ Ancetine နဲ့ Pavulon ဆေးတွေ ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်လာပါတယ်။ မင်္သကာလို့တစ်ခြားသေဆုံးသွားတဲ့ လူနာတွေရဲ့အလောင်းကို စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း အဖြေကအတူတူပါပဲ။ Angelo က သူလုပ်ခဲ့တာတွေကိုဝန်ခံပြီး ငါကိုယ့်ငါယုံကြည်မှု မရှိခဲ့ဘူး။ ငါဘာမှ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့ ခံစားရတယ်ဆိုပြီးလည်း ပြောသွားပါသေးတယ်။ သူ့ကိုတရားရုံးတွေက လူသတ်မှုအပါအ၀င် တစ်ခြားစွဲချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရုံးတင်ခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ် ၆၁ နှစ်ကနေ တစ်သက်တစ်ကျွန်းအထိ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ သူ့ကို New York ပြည်နယ် Clinton Correctional Facility မှာချုပ်ထားပါတယ်။
Andrew Cunanan (Killings between April 1997 and July 1997)
Andrew Phillip Cunanan ကတော့ စကားပြောသိမ်မွေ့ပြီးတော့ ရုပ်ရည်ခန့်ညားတဲ့ လူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘ၀င်မြင့်ပြီးတော့ လူဂုဏ်တန်တွေနဲ့သာ ပေါင်းသင်းလေ့ရှိပါတယ်။ Cunanan ဟာ မကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေနဲ့ ကျော်ကြားတဲ့သူပါ။ တစ်ခုကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ fashion designer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gianni Versace ကို သတ်တဲ့အမှုဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ FBI ရဲ့ ထိပ်တန်းအလိုရှိသူစာရင်း ၁၀ ယောက်ထဲမှာ အခွန်ကိစ္စတွေ၊ ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပါဝင်နေလို့ပါပဲ။ Cunanan ဟာ San Diego မှာ ပထမဦးဆုံးထိပ်တန်း အလိုရှိသူစာရင်းထဲဝင်တဲ့သူ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Cunanan ကို National City, California မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ အထက်တန်း တက်ကတည်းက Cunanan ဟာ လိင်တူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လည်း လူတွေက သူ့ကိုသတိထားမိကြပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်မှာတော့ သူဘွဲ့ရခဲ့ပါ တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အသက်ကြီးကြီး၊ လူဂုဏ်တန်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်နဲ့လည်း ဇာတ်လမ်းဖြစ်နေပါသေးတယ်။ သူ့မိခင်ကတော့ သူ့ကို ကြေးကြီးကြီးပေးရတဲ့ လိင်တူပြည့်တန်ဆာတစ်ယောက်ပဲလို့ ပြောပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ သူ့သားဟာ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူ မဟုတ်ဘဲနဲ့ တခြားသူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါတဲ့။ ကြားဖူးတာတစ်ခုကတော့ လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အသက် ၂၀ ကျော်တာနဲ့ အိုမင်းသွားပြီလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်တဲ့။ Cunanan အသက် ၂၈ နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ ချစ်သူတွေအားလုံးဟာ သူ့ကိုစွန့်ခွာသွားကြပါပြီ။ Cunanan မှာ အကြွေးတွေပြည့်နေတဲ့ credit ကဒ်တွေနဲ့ အထည်ကြီးပျက်အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်သွားပါတော့တယ်။ Cunanan ဟာ သူ့ကိုယ်သူ တောင် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်တွေတောင် တတ်လာပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေက သူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာအောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူ့ရဲ့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ချစ်သူ ၂ ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတွေ့နေတာကို သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့မနာလိုစိတ်ဟာ အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ သူ့နောက်ကွယ်မှာ ချိန်းတွေ့နေကြတဲ့ ကောင်လေး ၂ ယောက်လုံးကို တရက်ခြားစီပဲ သွားတွေ့ပြီးတော့ သတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ သူ့ရဲ့လူသတ်သမားဘ၀က စတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်း Cunanan သတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကလည်း သူနဲ့ပက်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။ သူ့ရဲ့သားကောင်တွေထဲမှာ နာမည်ကြီးအီတလီ designer ဖြစ်တဲ့ Gianni Versace လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Gianni ကို သတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ Gianni ရဲ့ အိမ်ရှေ့ကြမ်းခင်းပေါ်မှာ သူ့လက်မှတ်ကိုရေးထိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ FBI ကို ဒီလူသတ်မှုကိုသူလုပ်တာပါလို့ ပြောသွားတာပါပဲ။ Gianni ကို သတ်ပြီး ၈ ရက်အကြာမှာတော့ အဖမ်းခံရမှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီး သူ့ကိုယ်သူ သေနတ်နဲ့ပစ်ကာ သတ်သေသွားခဲ့ပါတယ်။ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ လူသတ်ကောင်တွေဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ တကယ့်ကိုထိတ်လန့်စရာ လူသတ်ကောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေ လူသတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာ ငယ်ဘ၀ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ အများဆုံးပက်သက်နေတယ်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက ကောက်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ ငယ်ဘ၀မှာ ခံစားလာရသမျှ၊ မကျေနပ်သမျှအရာတွေကို ပေါက်ကွဲလိုက်ပြီးတော့ လူသတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ.. ဒီတစ်ခေါက်အတွက် Knowledge 101 ကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်မယ်နော်။ MYMC ပရိသတ်ကြီးလည်း စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ရင်လည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်။ နောက်များမှာလည်း ဒီ့ထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ၊ ဗဟုသုတရစရာ အကြောင်းအရာများကို တင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ MYMC ပရိသတ်များအားလုံးကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နော်။ Written & Translated By | ^AnGeL^, Lucifer
Miley CyrusAdolf HitlerDiego Forlanဦးသန့်UFOBill GatesဘဘဦးသုခDavid CopperfieldThe Most Extreme: SpeedChristmasBermuda Triangleဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းAlbert EinsteinAmerica’s Famous Serial Killers!Mahatma GandhiSeven Wonders Of The WorldSteve Jobs	Enter your email address:
Content View Hits : 8497581